Sunday April 15, 2018 - 18:05:11 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Illaahay waa qani, danbi dhaafe adoomaha naxariista wada gaadhsiiya. Waxa maalmuhu i bareen in Alle qofka sida uu jecel yahay ama haabka uu ku hayo uun Alle arsaaqada u soomariyo, haddaad xalaasha jeceshay sidaas uun filo, haddise aad raacdo ugu jirto meel dhac-dhac le, wax u dhaw filo. ‘Nin baahan nin buka badhax looguma dhiibo’, waxa ay daaran tahay sheekada sawirka, qofku marka inta badan xil loo dhiibo Jinbaa galla iyo cabsi xilka haddii lagaa qaado hageed qaban, tani waxa ay dadka qaar gayaysiisaa in darka uu leefo, waxna uu u cuno siddii oo aan bari arsaaqadi jirin. Intaa waxa raaca noloshu waa imtixaan sida Alle ku yidhi suuratul Cankabuut/Caarada, Aayada 2: ‘Dadku ma waxa ay moodayaan in lagu dhaafayo rumaynta oo aan la tijaabinayn, waa aanu tijaabinay kuwii idinka horeeyay, wuu ogaanayaa Alle kuwa ay ka dhab tahay iyo beenaalayashaba.’ Arrinku waa imtixaan iyo hubsasho, haddaba dharaga iyo baahiduba waa laba imtixaan oo kala duwan oo dadka oo dhami ay ku jiraan imikaba, bal fiiri keebaad ku jirtaa adigu, ka bacdina xisaabtaada iyo waxa ku mashquuliya u eeg sidii oo aad bari ka tagayso adduunyada, iyo waxa aad jeceshay in dadku ay ka sheekaystaan marka lagu bud-dhigo, waxa kuu soo bixi doona ahdaaf nololeed oo ka qiimo iyo aragti dheer jihada aad hadda u socoto. Qor liista sifooyinka aad jeceshahay in dadku dhimashaada dabadeed kugu xanto, u badal u jeedooyin sugan, ka bacdi isku day in aad kuwaa culayska saarto maalmaha guclada ku jira.
Tusaale ahaan shaqo la’aantu waa imtixaan dhalinta sabanku ay wajahayaa, laakiin kuwa shaqeeya iyo kuwa aad fursad shaqo haynba waxa aan kula talin lahaa in ay ku buuxiyaan firaaqada ay haystaan barashada diinta oo aad Kitaab Quraanka ee mudada dheer ku agyaala aad fahamto, markaa bilaw in aad xeraw noqoto oo aad tafsiirka raacato, haddii aanad Af-carabiga ku fiicnayn, bilaw kooras sanada oo Carabiya, barashada Carabigu waa luqad caalamiya marka koowaad mar labaadna waxa ay kuu sahlisaa barashada diinta. Kitaabka Alle fahamkiisu waxa uu ku furi doonaa nolol cusub, fahamka xikmada nolosha iyo fariintii Alle oo koobsanisa dhamaan dhinacyada nolosha ee Ibnu Adamka oo ay ka mid tahay dhaqaalaha, siyaasada, sharciga, horumarka iyo akhlaaq dhamaystiran, waxa aanad arki doontaa adiga oo mudo yar gudahood firfircoonaaday horumarna sameeyay. Mabaadiida Quraanku uu tartiib tartiibta u dhigay isku day in aad fahamto dhamaantood, maxaa yeeelay dadka imika diinta bartaa waa dad aan aqoon kale lahayn markaa adigu waxa aad dheer tahay wixii aad hore u baratay, ku xigsii barasha sunnada Rasuulkeena (CSW) oo ah in aad kitaabka Bukhaari aad bilawdo ama kutubta kale ee u dhiganta, si aad u fahamto fulintii waxyiga Alle oo uu hogaaminayo nabi Muhamed (CSW). Jidkani ma dheera oo haddii aad Digriiga Jaamacada afar sano kugu qaadatay kaba yar, waana bilaash barashada cilmiga samaawigu inta badan. Waxa jira dad badan oo aanu saaxiibo nahay oo ka hela in aan u sheego buugaagta faraha badan iyo tabobada shaqo ee aan warkooda hayo oo si niyad samaana u dhageeysta markaa aan fikir u sheego, haddii aan dhaho buugaa anaa hayana jeclaysta in aan u soodiro. Laakiin marka Kitaabka Alle lagu waaniyo yar jeesta, markaa haddii aad yara jeedsato, xasuuso cadawgaaga oo ah Iblays iyo ardaydiisa oo jecel in ay kugu shaqaystaan jarna kaa tuuraan aakhiritaan ka, sida Alle inoo sheegay.